स्पाइडर \_ 'को महाकाव्य यार्न - Zhuji Feihu वस्त्र मशीनरी कं, लिमिटेड
समय: 2019-02-18 हिट्स:
स्पाइडर \_ 'को महाकाव्य यार्न एक 2010 मंच भिडियो गेम विकास राम्रो-महसूस र एचएएल प्रयोगशाला र प्रकाशित nintendo लागि wii भिडियो गेम कन्सोल. यो दशौं installment छ स्पाइडरभिडियो गेम श्रृंखला र अक्टोबर मा जारी भएको थियो 2010 जापान र उत्तर अमेरिका र फेब्रुअरी 2011 अष्ट्रेलिया र युरोप मा. यो पहिलो प्रविष्टि छ स्पाइडर एक घर कन्सोलमा श्रृंखला देखि 2003 \_ 'कोस्पाइडर एयर सवारी र यसको पहिलो घर कन्सोल मंच खेल देखि 2000 \_ 'को स्पाइडर 64: क्रिस्टल Shards.
खेल निम्नानुसार स्पाइडर, जो यार्न परिवर्तन गरिएको छ र प्याच भूमि पठाइएको, संसार कपडा बाहिर पूर्ण गरे. उहाँले खेल \_ 'को antagonist रोक्न आदेश सँगै प्याच भूमि सिलाई प्रयोग गरिन्छ कि जादू यार्न को सात टुक्रा सङ्कलन गरेर राजकुमार Fluff मदत गर्नुपर्छ, यिन यार्न। स्पाइडर \_ 'को महाकाव्य यार्न एक अद्वितीय कला-आधारित दृश्य शैली utilizes; खेल \_ 'को क्यारेक्टर र वातावरण यार्न को सम्पूर्ण समावेश, कपडा, र अन्य शिल्प सामाग्री. को सबैभन्दा खेल विपरीत स्पाइडर श्रृंखला, स्पाइडर सास लिनु वा उड गर्न असमर्थ छ, बरु अन्य वस्तुहरु मा नट गर्ने क्षमता मा परेर, एक प्याराशुट जस्तै, एउटा कार, र एक पनडुब्बी, यस्तो ट्यांक र बाफ रेल रूपमा साथै ठूलो वस्तुहरु.
निन्टेन्डो संग अग्रानुक्रम मा राम्रो-महसूस विकास तेस्रो खेल, स्पाइडर \_ 'को महाकाव्य यार्न मूल Madoka Yamauchi द्वारा प्रस्तावित भएको थियो, जो एक को विचार संग आए "यार्न को दुनिया" भिडियो खेल रूपमा. यो रूपमा विकास गर्न थाले "Keito कुनै Fluff", राजकुमार Fluff अभिनय गर्ने कलाकार मुख्य protagonist रूपमा खेल, अघि अभिनय गर्ने कलाकार वर्ण अन्ततः स्पाइडर गर्न सरेका थिए. खेल \_ 'को ग्राफिकल शैली पोलिगनहरुको भन्दा राखिएको थियो जो वास्तविक जीवनमा कपडे को डिजिटल तस्बिरहरू मार्फत सिर्जना गरिएको थियो. खेल \_ 'को संगीत Tomoya Tomita द्वारा बना थियो.
खेल \_ 'को रिलिज अघि, स्पाइडर \_ 'को महाकाव्य यार्न मा जित्यो धेरै पुरस्कार E3 2010 लगायत शो को खेल बाट GameSpot. यो वर्ष पछि जारी भएको थियो हदसम्म सकारात्मक समीक्षा गर्न, एक सम्पादक \_ 'को रुचि पुरस्कार प्राप्त आईजीएन, जो यो रूपमा सब #95 आफ्नो "शीर्ष 100 आधुनिक खेल". अप्रिल को रूपमा 2011, यो बेचिएको छ 1.59 लाख प्रतिहरू विश्वव्यापी. यो मार्फत डिजिटल पुन जारी थियो wii यू eshopयुरोप र मई मा अष्ट्रेलिया मा 21, 2015, जुलाई मा उत्तर अमेरिका 28, 2016, र जापान अगस्ट मा 9, 2016. एउटा आध्यात्मिक उत्तराधिकारी स्पाइडर \_ 'को महाकाव्य यार्न शीर्षक Yoshi \_ 'को उल्ली विश्व मा जारी भएको थियो 2015 लागि wii यू.
अघिल्लो : हङकङ महसुस
अर्को : मुद्दा वजन तालिका